galmudugnews.com » Qalabka loo geeyay Radio Hargeysa, Oo Laga Qafeeyay Radio Muqdisho & Gaadhi Tvga Qaranku Leeyahay oo kusii Jeeda Hargaysa Home About
Home » WARARKA » Qalabka loo geeyay Radio Hargeysa, Oo Laga Qafeeyay Radio Muqdisho & Gaadhi Tvga Qaranku Leeyahay oo kusii Jeeda Hargaysa Qalabka loo geeyay Radio Hargeysa, Oo Laga Qafeeyay Radio Muqdisho & Gaadhi Tvga Qaranku Leeyahay oo kusii Jeeda Hargaysa galmudug on
Oct 27th, 2012 //
No Comment Views 16297Warar Rasmiya oo Aanu Helayno ayaa Sheegaya dawlada china ay ugu deeqday radiomuqdisho codka jamhuuriyada somalia qalab casri ah oo radio fm masaafo aad u dheer laga dhagaysan karo iyo qalab ay ugu tala gashay tv ga qaranka somaliyeed ee SNTV.
Qalabkaaas oo ahaa qalabcasri ah ayaa waxaa safiirka Soomalia u fadhiya dalka China Mudane Yusuf dheeg iyo xoghaya koowaad ee safarada oo sheegto inoo yahay Qunsulka Safaarada lakin ah xoghaya koowaad ayaa waxay qalabkii dawlada china ugu deeqday u weeciyeen magaalada Hargaysa.
Mr Yusuf dheeg iyo Cawaale ayaa qalabka siiyey maamulka siilaayo ayadoo qalabka la mariyey shirkada Dahab shiil oo qalabkan ka qaaday dalka China.
Soomalida China ku nool ayaa aad ula yaabtay kadibmarki qalabkii loogu deeqay Radiomuqdisho iyo Tvaga Qaranka Soomaliyeed loo weeciyey Hargaysa, Yuusuf Dheeg ayaa arinkan ku kacay waxaana qalabka ka dhoofiyey dalka China.
Xoghaya koowaad Cawale Cali Kulane, halka yusf dheeg uu ku suganyahay magaalada muqdisho hotel la dhaho amiira hotel oo ku yaalo isgoosyka Zoobeaktiisa.
Qalabka loogu deeqay Tvga qaranka oo aad qaali u ah ayaa la sheegay in uu ahaa Gaadhiweyn oo Studio Guur guura uu saaranyahay oo hadba meesha dhacda ka dhacdo si live ah looga tabin karo.
Gaadhigaas ayaan wali Hargaysa gaadhin waxana la sheegaya shirkada Dahab Shiil inay ka iibsatay Tv cusub oo laga furi rabo magalaada Djouti ee dalka Jabuuti.
Dhinaca kale Arinkan waxba kama ogo dawlada cusub, Hasa Ahaatee Ganacsato iyo Aqoonyahan china ku sugan ayaa aad ula yaabay ayagoo balan ku qaaday inay dacwad deg deg ah u gudbin doonaan dawlada Soomaliya.
dhacdada ugu hadal haynta badan ee maanta china ka taagan ayaa ah arinkan, Baaris iyo daba gal aan ku wadno safarada somalia ee China oo dad gaar ah ay ka macaasheen ayaan idin soo gudbin doonaa insha allah.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21011 hitsContact US - 19639 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15732 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15031 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13923 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13865 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13812 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13270 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11770 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11735 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11709 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11517 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11503 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11347 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11167 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11120 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11052 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11036 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10721 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10342 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10225 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10132 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10009 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 9911 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9773 hits Home About